Senator katirsan aqalka Congress-ka Mareeykanka oo sheegay in diyaaradaha Drones-ka ay dileen 4,700 qof.
Home Somali News Senator katirsan aqalka Congress-ka Mareeykanka oo sheegay in diyaaradaha Drones-ka ay dileen...
Senator Graham, oo katirsan aqalka Congress-ka Mareeykanka islamarkaasna ahaa dadkii sida aadka ah ugu ol ololeeynayay isticmaalka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Drones-ka, ayaa sheegay in tan markii la bilaabay adeegsiga diyaaradahaas ay dileen dad gaaraya 4,700, waxaana uu qiray ineey u badanyihiin dad rayid ah oo aan waxbo galabsan.
Waxaa xusid mudan in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee uu Mareeykanka kula dagaalamo Al-qaacida ay tureen gantaalo gaaraya ilaa boqolaal, islamarkaasna masuuliyiinta Mareeykanka ayaa had iyo jeer ka gaabsada ineey faah faahin ka bixiyaan.
Senator Graham, oo arintaas ka hadlaya ayaa yiri: “waxaan dilnay 4,700 qof, oo ay ku jiraan dad aan waxbo galabsan arinkaasna aad ayaan u necbeystaa, laakiin waxaa kaloo dilnay madax sar sare oo katirsan ururka Al-qaacida”.
Iyadoo ay jiraan dhaliilo aad ah oo ay soo jeediyaan qaar kamid ah aqalka Congress-ka Mareykanka iyo dhaqdhaqaaqyahano katirsan kooxaha xuquuqul insaanka, kuwaasoo shaki weyn ka qaba qaabka loo adeegsado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, iyo sharciyadooda, ayaa hadana senator Graham waxa uu aad u difaacay Siyaasada madaxweyne Obama iyo adeegsiga diyaaradahaas.
“Waa hub ay waajib tahay in la adeegsado, waa hub Taktiiki ah” ayuu yiri Senator Graham.
Hadalkan kasoo yeeray Senator Graham, ayaa noqonaya masuulkii ugu horeeyay ee sheega tirade rasmiga ah eek u dhimatay howlgalada ay fuliyaan diyaaradaha aan cidina wadin.
Dadka rayidka ah eek u dhintay howlgaladaas ayaa lagu qiyaasaa ineey gaarayaan ilaa 900 oo qof.
Senator katirsan aqalka Congress-ka Mareeykanka oo sheegay in diyaaradaha Drones-ka ay dileen 4